यामाहाले ल्यायो शुन्य प्रतिशत फाइनान्स स्किम - Lokpath Lokpath
२०७७, ५ असार शुक्रबार १२:३४
यामाहाले ल्यायो शुन्य प्रतिशत फाइनान्स स्किम
प्रकाशित मिति : २०७७, ५ असार शुक्रबार १२:३४
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.ले सामाजिक दुरी र सुरक्षित यात्राको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै यामाहा ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदमा शुन्य प्रतिशत (० %) फाइनान्स स्किम शुरु गरेको छ । ‘असहज परिस्थिति, सहज समाधान’ नाम दिइएको यो स्किमले नयाँ यामाहा खरिद गर्दा ग्राहकमाथि आर्थिक भारलाई समेत कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो स्किम अन्तर्गत ग्राहकले तीन वर्षअवघिका लागि शुन्य प्रतिशत (० %) डाउन पेमेन्टमा यामाहाका जुनसुकै मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, ग्राहकले शुन्य प्रतिशत (० %) ब्याजदरमा यामाहाका दुईपांग्रे खरिद गर्न सक्नेछन् । यसका अलावा यामाहाले आफ्नो सबै उत्पादनहरुमा १० हजार रुपैयाँ नगद छुट पनि व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।
‘यो दुर्भाग्यको कुरा हो कि कोभिड १९ ले देशको अर्थतन्त्र आक्रान्त छ । आफ्नो दैनिकी सहज र सुरक्षित बनाउँदा नागरिकमाथि समेत अतिरिक्त आर्थिक भार परिरहेको छ । अहिले सामाजिक दुरी र स्वास्थ्य सुरक्षा सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको छ । यो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हामीले यो नयाँ स्किम ल्याएका हौं,’ यामाहा नेपालका मार्केटिङ हेड विक्रम पौडेलले भने ।
साथै, यामाहाले डिजिटल प्ल्याटफर्मको माध्यमबाट मोटरसाइकल तथा स्कुटर बुकिङको शुरुवात समेत गरेको छ । यसबारे विस्तृत विवरण www. yamaha.com.np र यामाहाको सामाजिक सञ्जाल पेजमा उपलब्ध रहेको यमाहाले जनाएको छ ।
‘हुन्डाई क्रेटा एसयुभी बीएस–६’ नेपालमा सार्वजनिक, यस्तो छ विशेषता र मूल्य
काठमाडौं । नेपालमा हुन्डाई क्रेटा एसयुभी बीएस–६ मापदण्डको कार सार्वजनिक भएको छ ।
सुनको मूल्यमा सामान्य बृद्धि, कति पुग्यो तोलामा ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । आइतबार तोलामा
बजारमा अनुगमन टोली : कतै सामान बरामद, कतै बिक्रिमा रोक !
काठमाडौं । राजधानीको गोङ्गबु चोक नजिकै मिल सञ्चालन गर्ने श्रेष्ठ राइस एण्ड चिउरा